China burner factory na-emepụta | LYBH
Dika akụrụngwa electromechanical nwere akụrụngwa dị elu, enwere ike kewaa onye na-ere ọkụ n'ime usoro ise: sistemụ ikuku, sistemu mgbanye, sistemụ nlekota, sistemụ mmanụ na sistemụ kọmputa.
Usoro nnweta ikuku
Ọrụ nke sistemụ ikuku ikuku bụ inye nri ikuku site na ụfọdụ ikuku ikuku na olu ya n'ime ụlọ ọkụ. Ihe ndi ozo bu: shei, moto oku, ihe nkpuchi ikuku, ikuku oku ikuku, onye na-acho mmiri, ihe omimi, CAM na-achikota usoro na ntanye mgbasa.
Usoro mgbanye ọkụ
Ọrụ nke sistemu mgbanye bụ ịgbanye ngwakọta nke ikuku na mmanụ ọkụ. Ire ọkụ ogologo, cone Angle na udi nwere ike e mere dị ka onye ọrụ chọrọ.
Usoro nlekota oru
Ọrụ nke usoro nlekota oru bụ iji hụ na nchekwa na arụmọrụ nke onye na-ere ọkụ. Ihe ndi ozo bu ihe nlere oku, nlekota ihe nlere na nlekota onodu oku.
Usoro mmanụ ọkụ
Ọrụ nke usoro mmanụ ọkụ bụ iji hụ na onye na-ere ọkụ na-ere mmanụ ọkụ dị mkpa. The mmanụ ụgbọala usoro nke manu burner tumadi na-agụnye: mmanụ anwụrụ na nkwonkwo, mmanụ mgbapụta, solenoid valvụ, nozulu, oké mmanụ preheater. Ndị na-ere ọkụ gas na-abụkarị nzacha, ndị na-achịkwa, otu valvụ nke na-ekpo ọkụ, nke na-ekpo ọkụ solenoid valve, mmanụ urukurubụba mmanụ.
Usoro nchịkwa eletrik
Sistemụ njikwa elektrọnik bụ ngalaba iwu na etiti njikọ nke sistemụ ndị dị n'elu. Isi njikwa akụrụngwa bụ usoro ihe omume njikwa, nke a kwadebere n'ụzọ dị iche iche na mmemme maka dị iche iche burners. Mmemme a na-ahụkarị gụnyere: usoro LFL, usoro LAL, usoro LOA na usoro LGB.
1. Ọkụ zuru ezu, nwee ike imeghari na mgbanwe mgbali, na-achịkwa ikuku na-ekesa otu ugboro, combustion zuru ezu.
2. Ezigbo ọrụ nchekwa.
3. Usoro mmanu na-achikota mmeputa mmanu iji belata oriri.
4. Usoro nchịkwa eletriki na-ekpochapụ ifufe na 30 sekọnd, nke dị mma, ngwa ngwa, nchekwa ma kwụsie ike.
5. Oke akwa mkpuchi mkpuchi nwere ike ichebe igwe site na mmebi, mee ka igwe ahụ kwụsie ike ma mee ka ndụ ya dị ogologo.
Nke gara aga: Super singzụta maka Rubber Recycling Plant - N'efu ụlọ pyrolysis osisi - LYBH
Osote: ọkụ gbawara okpomọkụ
Na-aga n'ihu Pyrolysis Osisi, Plastic imegharị ihe maka iji igwe, Ogbe Pyrolysis Osisi, Taya Pyrolysis, Imefusị rọba, Imefusị Taya Recycling Machine,